ZTE Quartz: SmartWest dị ọnụ ala karịa gam akporo Wear 2.0? | Gam akporosis
ZTE Quartz nwere ike ịbụ smartwatch dị ọnụ ala na gam akporo Wear 2.0
E jiri ya tụnyere ọtụtụ smartwatches ị nwere ike ịzụta ugbu a, na ZTE Quartz bụ ngwa ọgbara ọhụụ ya na imewe mara mma ma ihe ijuanya na ọnụ ala.
El ahịa smartwatch Ọ bụ ihe iju anya na afọ ndị a. N'otu aka, enwere ụdị dị iche iche nke na anyị nwere ike ịchọta ụdị sitere na ụwa ejiji ndị sonyeere ngwaahịa a. N'aka nke ọzọ, elekere ndị a bụ ngwaọrụ oke ndu ndu na onu ahia.
Ọbụna Apple achọpụtala na ọ bụ ihe nzuzu ịjụ ọtụtụ puku dollar maka smartwatch na n'ime afọ 2 ma ọ bụ 3 ga-adị nwayọ nwayọ na ị ga-achọ iwepụ ya.
ZTE Quartz achọtala nguzozi zuru oke n'etiti ogo na ọnụahịa
O doro anya ZTE nwere ezigbo uzommeputa maka ahịa a na ZTE Quartz smartwatch gị. Ngwaọrụ a bụ protagonist nke ọtụtụ asịrị na leaks na ọnwa ndị na-adịbeghị anya.
Odikwa na onwa a, na ZTE Quartz bụ otu n'ime ọnụ ala gam akporo Wear 2.0 smartwatches na atụmatụ ya dị oke nkwa.
N'ezie, anyị ga-achọ ịnwale ya tupu anyị eruo nkwubi okwu ikpeazụ, mana na-eche na ọ na-eweta Qualcomm Snapdragon Eyi 2100 processor na con 768MB RamỌ ga-abụ a ngwa ngwa smartwatch.
Ọzọkwa, ewezuga Android Wear 2.0 na a 4GB n'ime ebe nchekwa, ZTE Quartz nwekwara batrị 500mAh, GPS modul na njikọ LTE.
Nkwado maka netwọk LTE bụ akụkụ dị oke mkpa, ebe ọ na-eme ka ọ dị mfe ịkpọ oku ekwentị ozugbo site na nche, n'agbanyeghị ma ị hapụla ekwentị gị n'ụlọ.
Banyere imewe ya, ZTE Quartz zoro n'okpuru a Ngosiputa AMOLED nke gbara okirikiri nke anụ ọhịa 1.4 ya na mkpebi nke 400 x 400 pikselụ. Ọzọkwa, casing ya bụ ọla na eriri nwere ike ọ dị mfe dochie anya gị mmasị.
Naanị nsogbu nke elekere bu enweghi ihe mmetụta obi na NFC modul maka ịkwụ ụgwọ na Android Pay.
Ọnụ nke ZTE Quartz ga-abụ $ 199 ma enwere ike ịzụta ya site na Eprel 14.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » ZTE Quartz nwere ike ịbụ smartwatch dị ọnụ ala na gam akporo Wear 2.0
Otu n’ime ihe dị mkpa nke Galaxy S8 agaghị adị na mbido ya
4 ga - enwerịrị ngwa maka ndị hụrụ nnụnụ n'anya